Infographics: Yakanakira Traffic uye SEO
Sezvo iwe uchipenengura pasocial media kana mawebhusaiti, iwe unowanzo svika kune yakanyatso gadzirwa ruzivo ruzivo runopa tarisiro yemusoro wenyaya kana kuputsa matani edata kuita inoyevedza, imwe graphic, yakanyudzwa muchinyorwa. Chokwadi ndechekuti… vateveri, vaoni, uye vaverengi vanovada. Tsanangudzo ye infographic ndiyo chete ...
Infographics inoratidzira inomiririra yeruzivo, data, kana ruzivo rwakagadzirirwa kupa ruzivo nekukurumidza uye zvakajeka. Ivo vanogona kuvandudza cognition nekushandisa magirafu kuwedzera kugona kwemunhu kuona maitiro uye maitiro.
Sei Kuisa Infographics?
Infographics yakasarudzika, zvakanyanya yakakurumbira kana zvasvika pakushambadzira kwemukati, uye kupa akati wandei mabhenefiti kukambani iri kuagovera:
Copyright -Kusiyana nezvimwe zvirimo, infographics yakagadzirwa uye yakavakwa kuti igovane. Noti yakapfava kune zvakaburitswa, vatori venhau, vapesvedzera, uye vaverengi vavanokwanisa kuinyudza uye nekuigovanisa chero vakabatanidza kudzoka kune yako saiti uye nekupa kiredhiti itsika tsika.
Cognition -Akanyatsogadzirwa infographic inogayiwa nyore uye inonzwisiswa nemuverengi. Mukana wakanakisa wekambani yako kupaza maitiro akaomarara kana musoro uye kuita kuti zvive nyore kunzwisisa… zvinongoda kushanda nesimba.
Kugovana -Nekuti ifaira rimwe chete, zviri nyore kukopa kana kurevera paInternet. Izvi zvinoita kuti zvive nyore kugovera… uye yakakura infographic inogona kutoenda kuhutachiona. Imwe zano pane izvi - ive shuwa yekumanikidza infographic kuti irege kuda toni yebandwidth kurodha uye kuona.
Influencers -Saiti dzakadai Martech Zone izvo zvine pesvedzero yerudo kugovera infographics nekuti inotichengetera toni yenguva pakuvandudza zvemukati.
Tsvaga Nzvimbo - Sezvo masaiti achigovana uye akabatana kune yako infographic, uri kuunganidza zvakanyanya-zvakakodzera backlinks pamusoro wenyaya… kazhinji ichikwira kumusoro zviyero zvako zvemusoro wenyaya iyo infographic inokurukura.
Kudzokorora -Infographics inowanzova muunganidzwa wezvinhu zvakasiyana, saka kupaza iyo infographic inogona kupa akawanda ezvimwe zvidimbu zvemukati zvezviratidziro, mapepa machena, rimwe-mashiti, kana social media updates.
Matanho Ekugadzira Iyo Infographic
Tiri kushanda nemutengi izvozvi ane bhizinesi idzva, domain nyowani, uye tiri kuyedza kuvaka ruzivo, masimba, uye backlinks zve. An infographic mhinduro yakakwana yeizvi, saka iri kuvandudzwa. Heino maitiro edu ekugadzira infographics yemutengi:
Keyword Research -Takacherekedza akati wandei emazwi akakosha anga asina kukwikwidza zvekuti isu taida kutyaira chinzvimbo chesaiti yavo.
Relevance -Isu takatsvaga yavo yazvino vatengi base kuti ive nechokwadi chekuti musoro weiyo infographic yaive imwe yaizofarirwa nevateereri vavo.
tsvakurudzo -Isu takatsvaga sekondari masosi ekutsvagisa (wechitatu-bato) atinogona kusanganisira mukati me infographic. Kutsvagisa kwekutanga kwakanaka, zvakare, asi kwaizoda nguva yakawanda uye bhajeti kupfuura iyo mutengi aigadzikana nazvo.
Outreach -Takaona vanofurira uye mawebhusaiti akaburitsa infographics munguva yakapfuura izvo zvingave zvibodzwa zvikuru kusimudzira yedu itsva infographic zvakare.
chipo - Isu tinoisa pamwechete tsika yekupa pane iyo infographic kuitira kuti isu tigone kuteedzera traffic yese uye shanduko dzakagadzirwa neiyo infographic.
Copywriting -Isu takanyorera rubatsiro rweakanyanya copyrighter nyanzvi mupfupi, inobata-yekutarisisa misoro uye pfupi kopi.
branding - Isu takagadzira iwo chaiwo magiraidhi tichishandisa iyo kambani nyowani branding kutyaira ruzivo rwemhando.
Kuchinja -Takashanda kuburikidza nekudzokorora kwakati wandei kuti tive nechokwadi chekuti kopi, magirafu, uye infographic yaive yechokwadi, isina kukanganisa, uye mutengi aive akasununguka nazvo.
Social Media -Takatyora zvinhu zvegraphical kuti kambani iwane nhevedzano yezvesocial media kusimudzira iyo infographic.
chepamusoro -Takagadzira peji rekuburitsa, rakagadziridzwa zvakanyanya kutsvaga ne-refu-kopi kuti tive nechokwadi chekuti rakanyorwa zvakanaka uye isu takawedzera kutsvaga kweizwi rakakosha papuratifomu yedu yekutsvaga.
Kugovana -Isu takabatanidza mabhatani ekugovana munharaunda kuti vaverengi vagovane iyo infographic pane yavo yemagariro profiles.
ushambadzi -Makambani akawanda anobata infographics seimwe uye akaitwa ... kuvandudza, kutsikisazve, uye kusimudzira huru infographic nguva dzose inzira huru yekushambadzira! Iwe haufanirwe kutanga kubva pakutanga nezvese infographic.
Nepo infographic zano rinogona kuda mari yakakura, mhedzisiro yagara iri yakanaka kune vatengi vedu saka isu tinoenderera mberi nekuvagadzira sechikamu chezvese zvemukati uye social media zano. Isu tinozvisiyanisa pachedu muindasitiri nekungoita matani ekutsvagisa uye kushanda kuvandudza iyo infographic zvakanaka, asi isu tinodzosera ese epakati mafaera kumashure kumutengi wedu kuti adzokere kumwe kunhu mukuyedza kwavo kushambadzira.
Tora Infographic Quote
Iyi ndiyo yekare infographic kubva Mutengi Magnetism asi inoisa kunze zvese zvakanakira infographics uye inoperekedza zano. Makore gumi gare gare uye isu tichiri kugovera iyo infographic, kutyaira yekuzivisa kune yavo agency, nekupa chinongedzo chikuru kudzoka kwavari!
Tags: zvemukati zanomutengi maginetihighbridgeinfographicinfographic dhizainiinfographic dhizainiruzivo rwemifananidzokeyword chepamusorokeyword researchchepamusorokudzokorora zvirimoevanhu vezvenhaumagariro enhau kugovanasocial sharingkukosha kwe infographichutachionakuonavisualized contentchii chinonzi infographic
Aug 22, 2012 na6:49 PM
Infographics relevancy iri kukura zuva nezuva mumasocial media. The internet marketing agency yandakasarudza yaindiratidza manhamba chaiwo ekuti zvinhu izvi zvinoshanda sei chaizvo. Great post!